WALTR, baddelaha multimedia iyo uploader loogu talagalay Windows | Wararka IPhone
Maaha wax qarsoon taas dad badan ayay ku adag tahay inay ku maareeyaan iPhone-kaaga adoo adeegsanaya iTunes. Codsiga multimedia ee Apple waa codsi aad u fiican oo, markii aan u tagno, uu yahay mid aad u fudud oo fudud, laakiin dhammaanteen iskuma fikirno isku mid. Taasi waa sababta qaar badan oo idinka mid ahi u raadiyaan waxyaabo kale sida iFunbox ama iMaging, laakiin waxay joojiyeen inay la shaqeeyaan imaatinka macruufka 8.3. Haddii aad rabto inaad maamusho fiidiyowyadaada iyo heesahaaga adigoon isticmaalin iTunes, bilaa JAILBILA, si dhakhso leh oo fudud, beddelkaaga waxaa loo yaqaan WALTR.
WALTR waa codsi jira oo kaliya sababta kaliya ee looga takhalusi karo dhibaatooyinka marka laga wareejinayo faylasha faylasha badan (maqalka iyo muuqaalka) kombiyuutarka lagana wareejinayo iPhone / iPod ama iPad. Dhibaatooyinka la tirtiray waxaa ka mid ah in lagu qasbo badalo feylasha, taas oo la sameyn doono inta feylasha la wareejinayo qalabkaaga. Dhanka kale, iDevice-kaaga uma baahna in xabsiga laga jaro.
Nidaamku ma sahlanaan karin: waxaan kaliya ubaahan nahay inaan u jiideyno feyladeena daaqada WALTR si aan u bilowno howsha wareejinta. WALTR waxay jirtay muddo dheer OS X, laakiin guusheeda sii kordheysa ayaa ugu dambeyn ka dhigtay Windows, sidoo kale.
Waxyaabaha wanaagsan ee ku saabsan nooca WALTR ee Windows-ka ayaa ah inuu leeyahay naqshad ka taxaddar badan qaabka Mac-da, sidaan horay u sheegnay, wuxuu isku daraa uploader (upload) iyo ku beddelaad isku cod ah, si Faylal badan oo fara badan oo lagu daadiyo daaqada WALTR waxaa loo soo rari doonaa qalabkaaga iOS iyadoo loo eegayo qaab la jaan qaadi kara.. Sidoo kale, qodob kale oo ay kuxirantahay ayaa ah inaanan ubaahnaan doonin codsi dhinac saddexaad ah si uu ugu ciyaaro feylasha, ilaa waxaa loo wareejiyaa fiidiyowyada iyo muusikada laga soo qaado iPhone / iPod ama iPad. Ma weydiisan kartaa wax intaa ka badan?
Softorino, kooxda horumarinta WALTR, ayaa leh ayaa ka shaqeynaya ku darista taageerada cinwaanka cinwaanka, taas oo ku habboon kuwa doonaya in ay marmar daawadaan filim ku jira VOS. Nooca Mac-ka ayaa horeyba u lahaa shaqadan, markaa ma ahan in waqti dheer lagu qaato in la tago Windows-ka.
Laakiin wax sidaas u wanaagsan run ma noqon karo. Xaaladdan oo kale, waa, laakiin wax badan baa luminaya haddii aan eegno qiimaheeda. Sida codsi kasta oo tayo leh, WALTR waa codsi qaali ah, waa la sheegaa waxna ma dhacaan. Iyada oo leh qiimaha $ 29.95 Nooca ugu raqiisan, waxaa laga yaabaa inay fiicnaato inaad barato sida loo isticmaalo iTunes liiskaaga muusikada iyo codsi dhinac saddexaad ah oo fiidiyow ah si aad ugu raaxeysato waxyaabaha aad ka kooban tahay. Laakiin haddii, adoo og wax walba, aad weli xiiseyneyso inaad hesho WALTR, waxaad ku heli kartaa meeshaas http://softorino.com/waltr. Waxaa jira a 14 maalmood oo tijaabo ah, ku filan in lagu ogaado haddii dalabku ku xiisaynayo iyo in kale. WALTR waa codsi aad u wanaagsan, haddii aadan aadin iTunes, waxaa laga yaabaa inay u qalanto. Waxbadan ayaan kubixiyay barnaamijyada aanan isticmaalin. Dhammaan waxay kuxirantahay baahida isticmaale kasta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » iTunes » WALTR, beddelka weyn ee iTunes si loogu fayl galiyo iPhone-ka, hadda sidoo kale Windows
Jean Carlos Valderrama C. dijo
Waxay ahaan laheyd mid wanaagsan oo nadiifiya keydka barnaamijyadooda
Jawaab Jean Carlos Valderrama C
Miguel Rivas Mendez dijo
Dhakhtarka Batariga wuu u shaqeeyaa taas wuxuuna ku yaal App Store.
Jawaab Miguel Rivas Méndez
Waad ku mahadsantahay xogta
Battery Doctor dhankaas? Mahadsanid
Jawaab ku sii Mathews Huamán Maraví
Ciise Solano dijo
Haa aad u fiican
Jawaab Ciise Solano
Damian Morales sawir-haye dijo
Andre Cruz ayaa fiirinaya
Jawaab Damian Morales
Codsigan ma ciyaari karaa ciyaaro? Waxaan ku taageerayaa horumarkayga ifunbox oo keydinaya maktabada iyo dukumintiyada galka xaalad deg deg ah, taasi waa sababta aan ugu dhagsanahay 8.2 laakiin horeyba waxaan uheystay cilladaha qaar mana doonayo inaan soo celiyo ilaa iyo inta la midka ah ee ka soo baxda 8.3, 8.4 ama ios 9
Jawaab Hugo Salazar